कार्टुन भित्र बच्चा भेट्ने आमाको दर्दनाक काहानी, छिमेकिले यस्तो सम्म गर्छन् (भिडियो) – Naya Kura Daily
August 1, 2020 85
यतिबेला विश्व कोरोनाको मारमा भएतापनी बिस्तारइ जानजीवन सामान्य हुँदैछ । सामान्य जनजीवन संगै अपराधीक घटना निक्कै देखिन थालिसकेको छ । न पाप धर्मको ख्याल छ, न आफ्नो जीवनका विगत सम्झिएर पीडा बोध गर्छन । हालै काठमाण्डौंमा यस्तै घटना घट्यो ।
केही दिन अघी धेरैलाई सोच्न वाध्य एउटा घटना घट्यो । त्यो हो कपन आकाशेधाराको । झाडीमा, टेस्टी बिस्कुटको बाकसमा कपडामा बेरिएको अवस्थामा भेटिएकी बालिकालाई अहिले आमा बनेर पुष्पा अधिकारीले हे’रचाह गरिरहेकी छिन् । यति सुन्दर अनि नि’र्दोष बच्चालाई यो बर्षायामको समयमा त्यसरी छा’डेर जाने आमा कति नि’र्दयी होलिन् ? त्यसरी फा’ल्नु नै थियो भने यी नाबालिकालाई संसारमा जन्म नै किन दिईन् होला ? हेरै बच्चा भेट्ने आमाको काहानी :
Prevअज्ञात समूहद्वारा धारिलो हतियार प्रयोग गरी महिलाकाे हत्या, श्रीमान गम्भीर घाइते
Nextशनिबारको दिन यी चिज देखिएमा गरेको हरेक काम सफल हुन्छ !